Qiso Cajiib Ah : Maxaa Kala Qabsaday Budhcad Bangi U Dhacday Iyo Masuuliyiintii Iyo Shaqaalihii Bangigaasi? - Wargane News
Home Somali News Qiso Cajiib Ah : Maxaa Kala Qabsaday Budhcad Bangi U Dhacday Iyo...
Niman budhcad ah oo hubaysan ayaa gudaha u galay bangi la yidhaa GUANGZHOU oo ku yaala dalka Shiinaha oo shaqaynaya waxaanay dadweynihii ku sugnaa bangiga amar ku siiyeen “Inay dhulka isku wada daadiyaan, oo ay beerka dhulka saaraan iyagoo labadooda gacmoodna hortooda ku fidinaya”, waxay sidoo kale ku yidhaahdeen iyagoo u digaya “Ha is dhaqaajinina, lacagta dawladdaa iska leh, idinkiina lafihiina ayaad leedihiin”.
Dadkii mid waliba sidii la yidhi ahaw ayuu ku qallalay, Markii ay gabadh shaqaale ahayd oo miiskii hawlaheeda fadhidaa, ay iyadoo naxsan ku qayliday “Waa budhcad bangiyeed” si ay usoo jeediso waardiyayaashii mar horraba taladaba lagala wareegay, waxay ugu jawaabeen “Fadlan qof ilbaxa iska dhig, waxa loo socdaa waa bangi-dhicise maaha kufsi”.
Markii ay budhcad-bangiyeedkii ku guryo noqdeen goddadkoodii, ayuu kii ugu da’da yaraa kooxdu uu odaygii ugu weynaa inta uu xaggiisa ku jeedsaday ku yidhi “Kaabe, aynu tirino si aynu u ogaanno xoolaha aynu bushqadaha ku sidaannaa intay leeg yihiin”.
Kaabihii kooxda intuu ilka-caddeeyay yidhi “Miskiin, ma inagaa waxan oo lacag ah kala tirinteeda ka gayoonayna maantoo dhan, aynu iska nasano caawaba warka Tv-ga ayaa inoo sheegi doona intay tahay lacagtuye”.
Haddaba, qoladii budhcaddii ahayd ayaa markii ay si deg-deg ah hawshoodii u fushadeen, wixii ay gacmaha la gaadheen ee waqtigu u saamaxayna ay la tageen, ayuu guddoomiyihii Bangigu ku amray Kormeerihii Bangiga inuu si dhakhso ah u garraaco bilayska, si ay usoo gurmadaan, Balse Kormeerihii ayaa ku yidhi “Sug horta, aynu innaga lafteenu meesha ka qaadano 10 Milyan oo dollar, oo aynu u dhex raacino billiliqada dhacday, oo aynu ku darsano 70-kii Milyan ee aynu horraba u meelaysanaye”.
Markii ay isla qaateen, ayuu yidhi Kormeerihii “Fiicnaan lahaydee, bangi-boobkan oo bil walba inagu dhacdaa”.
Maalintii ku xigtay, ayuu warkii Tv-gu wuxuu sheegay in la dhacay 100 milyan oo dollar. Markii ay budhcad-lacageedkii ay bushqadahoogii dib ugu noqdeen ee ay wada hurgufeen, wixii ay meesha ugu tageenba waxay dhaafi weyday 20 Milyan oo dollar.
Nimankii budhcadda ahaa ay ciil dibinta ruugay, markay ogaadeen sida loo hafrayo ee loogu nisbaynayo waxayna qaadan.
Mid ka mid ah budhcada ayaa yidhi isagoo madax lulaya “Nolasheenna waxaynu khatar ku galinay, sidii ay labaatan xun ee aynu haysano ku hali lahayn, Maamulihii bangiguna ayaar buu isagoon is-hawlin 80 Milyan hoosta gashaday, xattaa si aad budhcad bangiyeed khatar ah u noqoto waa inaad waxbarasho lahaataa”
Masuulkii bangigu aad buu dhoosha uga qoslay, waayo khasaarihii iyo dhaqaale-xummaantii suuqa kasoo gaadhay, waxa qariyay oo uu eeddeeda saari doonaa bangi-boobkan ku dhacay”.